Kambana telo : Salama tsara i Dorlys, Donatien ary Design -
AccueilSongandinaKambana telo : Salama tsara i Dorlys, Donatien ary Design
Kambana telo : Salama tsara i Dorlys, Donatien ary Design
16/02/2018 admintriatra Songandina 0
10 andro aty aoriana, mbola salama tsara i Beanjara Dorlys, Donatien ary Design, ireo zaza kambana telo mianadahy teraka ny 5 febroary lasa teo tany amin’ny hopitaly be Toamasina. Izy ireo izay tsy ampy lanja teo ampiterahana, satria 1 kg 20 izy mirahalahy kely Dorlys sy Donatien, raha toa ka, 1 kg 16 kosa i Design vavy kely. Salama tsara koa ny renin’izy ireo, saingy mbola marefo ka manohy ny fitsaboana ao amin’ny hopitaly amin’izao fotoana izao. Raha tsiahivina, dia tonga nanome fanampiana ny ray aman-drenin’ ireo zaza kambana telo mianadahy ireo ny mpanolotsaina manokan’ ny Filoham-pirenena, ingahy Mbola Rajaonah sy ny lehiben’ny prefektoran’i Toamasina, Benandrasana Cyrille ny talata teo , ka nisolo tena azy ireo tamin’izany ny Sekretera jeneralin’ny Préfektoran’i Toamasina. Rom-patsa mitentina 500 000 Ariary, savony iray baoritra, bodofotsy miisa 4, lay misy ody moka , ary vary iray gony no natolotra tamin’izany.